ပင်မစာမျက်နှာ - Hayman Microfinance in Myanmar
Hot Line : +၉၅ ၉ ၄၅၇ ၁၉၉ ၆၅၆
A Full Licensed Deposit-taking Microfinance Institution in Myanmar, Since 2015
ကျွန်ုပ်တို့ရည်မှန်းချက်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဦးဆောင်နိုင်သည့်ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်လာရန်နှင့် သန်းပေါင်းများစွာသောဖောက်သည်များကို ကျယ်ပြန့်သောကွန်ယက်စနစ်ဖြင့်ရုံးခွဲများ မှတစ်ဆင့် အရည်အသွေးရှိသောချေးငွေထုတ်ကုန်များကိုနိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီသော စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်ဖြစ်သည်၊၊
ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့် ရည်ရှည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး ၎င်းတို့၏ လူနေမှုအဆင့်အတန်း တိုးတက်မြင့်မားလာစေရန် နှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်အတွက် အဓိကဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်သည်၊၊ ထို့အပြင်ငွေချေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် အပြန်အလှန်အကျိုးပြုစေရန်ဖြစ်သည်၊၊ ဟေမန်ကက်ပီတယ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အခြေခံစည်းမျဉ်းများမှာ ရည်ရှည်အပြန်အလှန် အကျိုးပြုဆက်ဆံရေး တည်ထောင်ရန်ဖြစ်သည်၊၊
Uplifting Lives through:
Success Stories with Hayman
မမျိုးမျိုးကတော့ ပဲခူးမှာရှိတဲ့ Client တွေထဲက တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ MM ဖက်ရှင် ဆိုင်ရှင် တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး ကိုယ်တိုင်လည်း အကျီဒီဇိုင်းတွေ ချုပ်လုပ်ရောင်းချသူတစ်ဦးပါ။ ဟေမာန် ကတ်ပီတယ်နဲ့ ၂၀၁၆ မှာ စတင်လက်တွဲခဲ့ပြီး နှစ်နှစ် အကြာမှာ စီးပွားရေးတွေ အဆင်ပြေ လာကြောင်းအခုလို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ “ အရင်က အမတို့က အင်္ကျီဆိုင်၊ဖက်ရှင်ဆိုင်ပဲဖွင့်ပါတယ်။ ဟေမန်နဲ့ လက်တွဲ ပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုရင် ဖက်ရှင်ဆိုင်မှာ ပစ္စည်းတွေ…
အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ဓါတ်ပုံထဲမှာ ခြေသုတ်ခုံရက်လုပ်နေသူကတော့ လှည်းကူး၊ သာယာကုန်းကျေးရွာက တနိုင်တပိုင် ခြေသုတ်ခုံရက်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင် မနှင်းယုထွေးဖြစ်ပါတယ်၊ သူမကတော့ ခြေသုတ်ခုံရက်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတာ ၇နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။ လတ်တလောမှာတော့ ပစ္စည်းတွေကို ထောက်ကြံ့နဲ့ လှည်းကူးဈေးမှာ လက္ကားရောင်းချပေးနေသူ ဖြစ်ပါတယ်။ Hayman နဲ့လက်တွဲရင်း ရရှိလာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို မနှင်းယုထွေးက အခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ "မိုးတွင်းမှာဆိုရင် ဈေးကွက်ထဲမှာ ခြေသုတ်ခုံတွေက ပိုလိုအပ်တယ်ပေါ့။ အခုနှစ်ထဲမှာဆိုရင် Hayman ကချေးယူထားတဲ့ငွေတွေနဲ့ ကုန်ကြမ်းတွေ ပိုဝယ်လာနိုင်တယ်။ ပိုထုတ်လာနိုင်တယ်။ အခုဆို တစ်ရက်ကို…
Hayman Capital နဲ့လက်တွဲရင်း အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိထားတဲ့ နောက်ထပ် မိတ်ဆွေကတော့ သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့နယ်က မအိသူဇာဝင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ "Sure Choice Beauty and Hair Saloon" ဖွင့်လှစ်ထားတာ ၈ နှစ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ Hayman Capital နဲ့လက်တွဲပြီးတဲ့နောက် ဆိုင်မှာ အလှကုန်ပစ္စည်းတွေ ပိုပြီးဖြည့်လာနိုင်ပြီး အရင်ကထက် ဝင်ငွေတွေ ပိုတိုး လာတယ်လို့" လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုအခြေအနေတွေကို မျှဝေပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
လှည်းကူးမြို့နယ်၊ ပန်းတောကုန်း ကျေးရွာက မရွှေစင်မြင့် ကတော့ စကားနည်းပြီး အပြုံးချိုတဲ့ client တစ်ယောက်ပေါ့။ မျှစ်ပေါတဲ့ရာသီချိန်ဆိုရင် ရွာနဲ့မလှမ်းမကမ်းက ဝါးတောမှာ မျှစ်ချိုး၊ ဝါးခုတ်ပြီး နေ့စဉ်ဘဝကို ဖြတ်သန်းနေသူဖြစ်ပါတယ်၊ ဟေမန်ကတ်ပီတယ်နဲ့ ၂၀၁၆မှာ စတင်လက်တွဲခဲ့ပြီး တစ်ပိုင်တစ်နိုင် လုပ်ငန်းလေး တွေနဲ့ အသက်မွေးရင်း အခုဆို ရွာမှာ အိမ်သစ်တစ်လုံးကို ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။
We're Trusted by Over 100,000 Customers.
အန်ကယ်ဦးအောင်မြင့်စိန်တို့ မိသားစုဟာ ဟေမန်န
Hayman Capital နဲ့ လက်တွဲရင်း ပျော်ရွှင်နေတဲ့ နောက်ထပ�
ပုံထဲမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ အန်ကယ်ကတော့ ညောင်လေး
ငယ်စဉ်ကတည်းက သစ်ပင်ပန်းပင် စိုက်ပျိုးရတာ ဝါ�
Hayman Microfinance partners up with Citizens Pay
We are proud to be announcing partnership between Hayman Microfinance,aleading provider of financial services and one of the biggest Microfinance in Myanmar and Citizens Pay, one of the fastest growing digital payment services.
Hayman Microfinance launches industry-leading digital Loan Application App
Hayman Microfinance launched its first-ever multifunctional digital Loan Application App on Google Play Store this week.
SMU Announces Case Study on Hayman Microfinance’s CSR
Singapore Management University (SMU) recently completedacase study on Hayman Microfinance’s (Hayman) ​​Corporate Social Responsibility (CSR) activities in Myanmar
Group Chairman & Founding Partner
Mrs. Nweni Soe
အမှတ် ၄ / D၊ ဒုတိယရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းလမ်းနှင့်ထောင့် ၇ လမ်းထောင့်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
+၉၅ ၁ ၆၆၃ ၃၆၉ , +၉၅ ၉၉၇၀၀၂၁၄၁၀
+၉၅ ၉ ၉၇၀ ၀၅၁ ၄၁၀(Viber)